Mugabe makaipa: Chinese troops patrolling Zim?
Chinese troops have been seen on the streets of Zimbabwe's third largest city, Mutare, according to local witnesses. They were seen patrolling with Zimbabwean soldiers before and during Tuesday's ill-fated general strike called by the opposition Movement for Democratic Change (MDC).
Earlier, 10 Chinese soldiers armed with pistols checked in at the city's Holiday Inn along with 70 Zimbabwean troops.
One eyewitness, who asked not to be named, said: "We've never seen Chinese soldiers in full regalia on our streets before. The entire delegation took 80 rooms from the hotel, 10 for the Chinese and 70 for Zimbabwean soldiers."
China's support for President Mugabe's regime has been highlighted by the arrival in South Africa of a ship carrying a large cache of weapons destined for Zimbabwe's armed forces.